Manifesto - World March
Mbido » Gosi
Na-egosi World March
Afọ iri mgbe Mbụ World March maka Udo na Nkwụsịghị, ihe ndị kpaliri ya, n'agbanyeghị ịbụ onye e belatara, ewusiwo ike. Anyi bi n’ime uwa ebe ndi n’otu n’otu na-eto. Ọrụ United Nations guzobere iji dozie esemokwu mba ụwa na-ebelata ike. Wa nke merie n'ọtụtụ agha, na-abụkarị ihe ndị na-abụghị eziokwu mebiri emebi. Na ebe obibi ọdụdọ na Ụlọ nke Rome ọkara narị afọ gara aga Mụ na ọtụtụ nde ndị na-akwaga mba ọzọ, ndị gbara ọsọ ndụ na ndị a chụpụrụ na gburugburu ebe obibi na-amanye ha ịgbagha ókè nke ikpe na-ezighị ezi na ọnwụ. Ebe ebumnuche ya izi ezi agha na mgbuchapụ maka esemokwu akụ na ụba na-arịwanye elu. Ebe esemokwu nke "jopolitical plate" dị n'etiti ike adị na ike na-apụta na-eweta esemokwu ọhụụ na nke dị ize ndụ. Worldwa nke anyaukwu nke akụ na ụba kachasị njọ, ọbụna na mba ndị mepere emepe, atụmanya ọ bụla nke ọha mmadụ. Iwe dị ọkụ nke a na-ebute na-ejikwa ịchịkwa ma na-eme ka mmegharị nke iju nke nnabata na ndị si mba ọzọ kwabata. Na nkenke, ụwa, nke izi ezi nke ime ihe ike, n'aha nke "nchekwa", na-eme ka ihe ndị agha na-arịwanye elu na-enweghị nchịkwa.
El Nkwekorita na Nbuli nke Ngwá Agha Nuclear, site na 1970 , tere aka imeghe uzo na-achi achi achipu ngwa agha nke nuklia, emeela ka o guzosie ike
ike nke mbibi oke, ịgbasa ọbụna mbido ọnwụ ụwa mbụ na ngwa agha nuklia ugbu a n'aka US, Russia, China, United Kingdom, France, Israel, India, Pakistan na Republic of Korea. Ihe ndị a niile na-akọwa ihe kpatara Kọmitii Atọm Sayensị Atọm ji tinye ndepụta dị ugbu a (Doomsday elekere) dịka ihe ize ndụ zuru ụwa ọnụ dị na ya Nsogbu nke Missiles nke Cuba na 1962.
Taa, nke 2M World March maka Udo na Nnochi, dị mkpa karịa mgbe ọ bụla. A na-eme atụmatụ ịhapụ Madrid na October 2 nke 2019 iji kpọọ kọntinenti niile, rue March 8 nke 2020 nke ga-agwụ na Madrid. Ọ ga - akwalite mmụta na ime ihe ike ma mekwaa mmegharị nke gburugburu ụwa na - agbachitere ma na - akwalite ndị
ochichi onye kwuo uche ya, ikpe ndi mmadu na gburugburu ebe obibi, oha nhatanha nke nwoke na nwanyi, ịdị n'otu n'etiti ndi mmadu na nkwado nke ndu uwa. Machị nke na-achọ ime ka a hụ ya anya ma na-enyere ndị ngagharị a aka, obodo na otu dị iche iche, na mgbalị ụwa ọnụ maka ebumnuche ndị a:
Na-ebuli nnukwu okwu zuru ụwa ọnụ nke "anyị, ndị dị iche iche " nke Akwụkwọ nke United Nations, iji kwado ya Nkwekọrịta banyere Ngbochi Ngwá Agha Nuclear, na-ekpochapụ ohere nke ọdachi ụwa ma na-enye ihe onwunwe iji dozie mkpa ndị bu pụta ụwa.
Cheta las United Nations , inye ndi mmadu aka na obodo, na-eme ka ndi ochichi nke onwe ha gbanwee ya Udo Udo Ụwa . ma na-eke a Council of Environmental and Economic Security, nke ahụ na-eme ka isi ise dị mkpa: nri, mmiri, ahụ ike, gburugburu ebe obibi na agụmakwụkwọ.
Were ya Atụmatụ Ịkwụsị Ịnwụ Ọgwụ, dịka SDG (Sustainable Development Goals), nke nwere ego ndị dị mkpa iji dị irè.
Tinye a Atụmatụ nke Ngwa ngwa ngwa megide ụdị okpukperechi nile, ịkpa ókè agbụrụ, ịkpa ókè, ịkpa ókè na mkpagbu site na mmekọahụ, afọ, agbụrụ, mba ma ọ bụ okpukpe .
Kwalite a Ọchịchị Democratic nke zuru ụwa ọnụ, nke mejuputara Nkwupụta banyere Rights Rights (obodo, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta akụ na ụba).
Soro Nhazi ala gaa na "Agenda International" nke ndị SDG, iji merie mgbanwe ihu igwe na n'ihu ndị ọzọ nke nkwụsịtụ gburugburu ebe obibi.
Na-akwalite Enweghị Ime Ihe Ike nke mere na ọ na-aghọ ezigbo ike mgbanwe nke ụwa, ịhapụ ọdịbendị nke imuputa, ime ihe ike na agha na ọdịbendị nke udo, mkparịta ụka na ịdị n'otu na obodo ọ bụla, mba na ógbè na ụwa zuru ụwa ọnụ transmitted anyị site na nke a March ụwa maka Udo na Nkwụsịghị.
Wepu ihe ngosi na PDF
Akwụkwọ ozi maka ụwa nke na-enweghị Ime Ihe Ike
Budata Manifesto (French)